मुना ह'त्यापछि आ'त्मह'त्या प्रकरण : नसुल्झेको एउटै प्रश्न, 'किन मा'रे त ?' कामदारको यस्तो बयान | Smart Khabar
मुना ह’त्यापछि आ’त्मह’त्या प्रकरण : नसुल्झेको एउटै प्रश्न, ‘किन मा’रे त ?’ कामदारको यस्तो बयान
काठमाडौं । प्लाष्टिकको पि’र्काले टाउकोमा बजार्दै नाईलनको डोरीले घाँ’टी कसी क्षतविक्षत हुने गरी कुट’पि’टपछि र’गतमा ल’त्प’तिएको अवस्थामा आफ्नै निवासमा भेटिएकी पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्कीकी श्रीमती मुना कार्की ह’त्या र सोही घरमा विगत ६ वर्षदेखि कामदारको रुपमा बसेका वर्ष २२ का विजय चौधरीको आ’त्म’हत्या प्रकरणमा मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले तीनजनासँग बयान लिइसकेको छ । यद्यपी सबैको मनमा उब्जिएको प्रश्न ह’त्या किन भयो ? भन्ने विषय भने अझै अनुत्तरीत नै छ ।
कामदार झु’ण्डि’एको अवस्थामा भेटिनु र मुना पनि टाउकोमा चो’ट र नी’ल डा’मसहित अचेत अवस्थामा भेटिएर मृ’त्यु हुनुले यो ‘घटना निकै शंकास्पद भएको र एउटा संगठित ह’त्या हुनसक्ने आशंका प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट गरिएको थियो । तर पछि सिसिटिभी फुटेज केलाएको प्रहरीको यो शंका भिडियोमा देखिएका भयावह दृश्यले दु’र गर्यो ।
अर्थात् मुनाको ह’त्या उनैका कामदार विजय चौधरीले गरेको देखियो । तर फेरि अर्को शंका थियो प्रहरीसँग । घ’टनामा त्यो आ’त्मह’त्या गर्ने व्यक्तिको डो’री चुडि’एको र उ पनि मृ’त अवस्थामा थियो । त्यसमाथि सिसिटिभी फुटेजमा चौधरीको आ’त्म’हत्या देखिएन । सिसिटिभी फुटेजपछि प्रहरीले आफन्त छिमेकीसँग बयान लिएको थियो । अहिले प्रहरीले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले अनुसन्धानको लागि कार्की निवासकी महिला कामदार, ड्राइभर र प्लम्बरसँग बयान लिएको छ ।
अनुसन्धान अधिकारीले यस घ’टनाको सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनको लागी भन्दै उनीहरुलाई छुट्टाछुट्टै प्रश्न सोधेको थियो । यसैबिच पूवैसचिव कार्कीको घरमा काम गर्ने ड्राइभर र प्लम्बरले ह’त्यामा संलग्न विजय चौधरीको आनिबानीबारे खासै जानकार नरहेको बयान प्रहरीसामू दिएका छन् ।
त्यस्तै घ’टना भएको दिन पूर्वसचिवका छोरालाई स्कुल पुर्याउन गएकी भनिएकी बिहान बेलुका पार्टटाईम काम गर्ने महिला कामदारले फरक बयान दिएकी छिन् । उनले बयानमा भनेकी छिन् । हो, विजय निकै रि’साहा स्वभावका थिए । महिला कामदारले भनेकी छिन् उ म काम गर्न जाँदा पनि झर्कन्थ्यो ।
रि’साउँ’थ्यो । आफ्नी घरमालिक अर्थात् मृ’तक मुना कार्कीले विजय रि’साहा स्वभावको भएको भन्दै उसँग विवाद नगर्न आफूलाई भन्ने गरेको समेत उनले बयान दिएकी छिन् । अनुसन्धानका लागि प्रहरीको अर्को प्रश्न घरधनीको आनीबानी थियो । ति तीनै जनाले मृ’तक मुना कार्की अर्थात् आफूहरुको घरबेटी असल हुनुहुन्थ्यो भन्ने आशयको बयान दिएका छन् ।
‘उनीहरूले प्रहरीसँग भनेका छन्, कार्कीको आनिबानी राम्रो थियो । हामीलाई उतिसारो कराउने गाली गर्ने गर्नुहुन्नथ्यो । उहाँको स्वभाव ‘कामदारलाई माया गर्ने खाले थियो भनेका छन् ।’ तर अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी भन्छन्, तीनजनाको बयान सकिए पनि अन्य व्यक्तिसँग बयान लिने क्रम जारी छ । यस घ’टनाबारे मिहिन ढंगले अनुसन्धान हुँदैछ । अनुसन्धान पछि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछौँ ।
दुवै जनाको मोबाइल फरेन्सिक ल्याबमा लगियो
अहिले प्रहरीले घ’टना नियोजित थियो या ह’त्या र आ’त्मह’त्या हो भन्ने विषयलाई लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । घ’टनाको कारण पत्ता लगाएर यदि ह’त्या नै हो भने यो रि’सइबीको कारण के थियो भनेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ह’त्या भएकी कार्की र ह’त्यापछि आ’त्मह’त्या गरेका चौधरी दुवैको मोबाइल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ ।
अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी अधिकारीका अनुसार कार्की परिवारको फोन डिटेल्सको पनि सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको छ । ‘घ’टना संवेदनशील भएकाले विविध कोणबाट अध्ययन हुनु जरुरी छ । त्यसैले, घ’टनाअघि र घ’टनापछि घ’टनास्थल क्षेत्रमा एक्टिभ भएका फोन र एप्सहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
कल डिटेल्सको पनि अध्ययन भइरहेको छ,’ परिसर प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले भने, ‘डिलेट गरिएका कल, म्यासेज, भ्वाइस रेकर्डलगायत फरेन्सिक ल्याबमा रिकभर हुन्छ । अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्था छैन ।’ तर फरेन्सिक ल्याबबाट डिलेट गरिएका कल म्यासेज पनि बाहिरिने हुँदा सत्यतथ्य थाहा हुनेछ ।
दुवै परिवारले श’व बुझे
दुवै मृ’तकको श’व परिवारले बुझेका छन् । बुधबार कार्की र चौधरी परिवारले श’व बुझेको प्रहरीले जनाएको छ । खै के भन्ने म त बे’होसमा छु । एउटा अँध्यारो कोठा जस्तो देखियो। उसले गरेको हो कि होइन केही भन्न सकिनँ। आफ्नो छोरा विजयले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको ह’त्या गरेको सिसिटिभी फुटेज हेरेर निस्किएपछि सञ्चारकर्मीलाई उनले दिएको प्रतिक्रिया हो यो ।
बुधबार मध्याह्न महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर पुगेका थिए उनी। प्रहरीले अहिले घ’टनामा ह’त्या गरी आ’त्मह’तया गर्नुको मोटिभ अर्थात् नियत के थियो भन्नेबारेमा खोजीरहेको छ । राम्रो घर र पछि राम्रो ठाउँमा जागिर लगाइदिन्छ। पठाइदेउ। भनेर अश्विन चौधरीको सुझावलाई मानेर छोरा विजयलाई काठमाडौं पठाएका थिए जानकीले । घरको अवस्था ज्यादै दयनीय भएका कारण छोराको पालनपोषण पनि हुने २ /४ रुपैयाँ पनि कमाई हुने भनेका कारण उनी श्रीमतीले शंका व्यक्त गर्दा पनि छोरालाई कलिलै उमेरमा काममा पठाउन बाध्य भएका रहेछन् ।
दाङको लमही नगरपालिका २ रनियापुरबाट काठमाडौं आएका विजय उनकै बुबाको भाषामा लजालु थिए । खासै बोल्दैनथे । झ’गडा पनि गर्दैनथे । मानिसहरुसँग कमै बोल्ने बानी भएको मानिसले कसरी अरुको ह’त्या गर्न सक्ला भनेर उनी अचम्मित छन् यतिबेला । अझ उनका छिमेकीले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै भनेका छन् विजय तयस्तो केटो छँदै थिएन । कतै घरमा काम गर्दा गाली खाएकाले त्यसकै रि’सले ह’त्या त गरेका होइनन् ? यो आशंका चाहिँ उनको मनमा छ । मृ’तक विजयको घरमा दुईजना साना भाइ, आमा र बुबा छन् ।
घ’टना भएको राति ८ बजे मोबाईल फोनमा खबर आयो छोरोले आ’त्मह’त्या गर्यो। उनलाई त्यतिमात्रै भनिएको थियो । आफ्नो छोराले यसरी मान्छे पनि मा’र्न सक्छ भनेर त कल्पना नै गरिएको थिएन । मृ’तक विजयका बुबाले खबर पाएपछि आफूलाई वेचैनी भएको छ भरोरात सुत्न नसकेको बताए ।
उनकी विरामी श्रीमतीलाई सम्हाल्नुपर्ने एकातिर अर्कोतिर साना दुई छोरा । आफ्नो मन पनि स्थिरमा छैन । यस्तो हालतमा उनी बौलाहासरी भएका थिए।
साथीभाइसँग पनि ‘झगडा नगर्ने मान्छे हो उ, उनी थ’प्छन्, पाँच महिना अघिमात्रै पा’ठेघरको श’ल्य’क्रि’या गर्न काठमाडौं आएकी विरामी आमाको विजयले नै उपचार गराएको। काठमाडौं मेडिकल कलेजमा श्रीमतीको उपचारका लागि आएका जानकीलाई पूर्व सचिव कार्कीले ५० हजार रुपैयाँसमेत दिएका थिए। तर पछिल्लो समय उनले घरमा पैसा नपठाएको भन्दै उनको परिवारले एक दैनिक पत्रिकासँग दुखेसो पोखेका थिए ।
कार्की परिवारकहाँ काम गर्न गएदेखि विजय ३ पटकमात्र गाउँ फर्केको उनको परिवार जनाउँछ । यसपाली गएको तिहारमा घर आएको थियो । उनको बुबा जानकी भन्छन् । गएको माघे संक्रान्तिमा २० हजार रुपैयाँ पठाएका रहेछन्।
जानकी संझिन खोज्छन् विजयको सात दिनअघि फोन गरेको थियो । त्यो नै अन्तिम कुराकानी हुन पुग्यो । त्यस दिन उनले घरबाट तेल र दाल मगाएका थिए । पाँच किलो भुटेको तोरीको तेल र मुसुरोको दाल पठाइदिनु भनेका रहेछन् विजयले । आफूलाई मेडमले नै तोरीको तेल र मुसुरोको दाल मगाउन भनेकी रहिछिन्। तेल र दालको जोहो गर्दै थिए जानकी अचानक फोनमा सुने छोराले आ’त्मह’त्या गरेको कुरा । काम गर्न गारो अप्ठेरो छ कि भनेर उनकी आमा सोध्थीन् । विजय जवाफ दिन्थे छैन । खासै ।
पूर्वसचिव कार्की , विजयका परिवार र उनका छिमेकी यस विषयलाई मान्न तयार नभएतापनि यी यस्ता घ’टना तत्कालको आवेग र रि’समा हुने बताउँछन् मनोविद् ।
कुनै रि’स र इ’गो मनमा गढेर बसेको भए त यो ए’क्स्ट्रिम रुपमा ब्ला’स्ट हुन्छ । अतिशय संशय पिडकलाई भए वा भाग्ने प्रयासबाट पनि बच्न सक्दिन वा समाचारमा सुनेजस्तो ह’त्या हुनसक्छ भन्ने ठानेको मष्तिष्कले आफूलाई पनि मा’र्छ । ह’त्यापछि एक किसीमको प्रश्चाताप प्रायश्चित भएतापनि समय घर्किसकेको र आफूले गराएको विभत्स दृश्यबाट बाहिरीन नसकेर मानिसले आ’त्मह’त्या गर्छ ।तर, कार्की प्रकरणमा फरेन्सिक रिपोर्ट आउँदै भएकोले यसै भन्न सकिन्न ।
घ’टनाको निष्पक्ष छा’नबिन गर्न जाहेरी
निर्मम तरीकाले ह’त्या गरिएकी मृत’क मुना कार्कीका श्रीमान् पूर्वसचिव अर्जुन कार्की र मुनाको ह’त्यापछि आ’त्म’ह’त्या गरेका भनिएका विजय चौधरीका बुबा जानकी चौधरीले घ’टनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रहरीमा छुट्टाछुट्टै जाहेरी दिएका छन् । दुवै परिवारले सद्गतका लागि श’व बुझेका छन् ।
को हुन् विजय ?
दाङ स्थाई घर भएका विजय चौधरी सामान्य किसान परिवारका व्यक्ति हुन् । राम्रो काम लगाईदिने भन्दै उनलाई एक जना चिनेजानको व्यक्तिले अर्जुनकुमारको घर ल्याएका थिए । उनी त्यस घरमा आउँदा सानै थिए । विजयको बुबा जानकारी चौधरी उनको श’व बुझ्दासमेत यो घ’टना छोराले गराएको हो भनेर पत्याउन सकिरहेका थिएनन् । किनकी उनी मुना कार्कीको नि’र्मम ह’त्या गरेर नयाँ जस्तो देखिने नाईलनको डोरीमा झु’ण्डि’एर आ”त्मह’त्या गरी प्राण त्यागिसकेका थिए ।
मुनाको प्राणपखेरु जान नसकेका कारण उनको शरीरमा न्यानो देखिएकोले नजिकैको स्टार अस्पताल लगीएतापनि चिकित्सकले उनलाई मृ’त घो’षित गरे । रगतको आहालमा डुबेकी उनको शरीरमा तातो भेटिएको भन्दै तन्नामा बेरेर स्टार अस्पताल लगिएको थियो । यो वि’भत्स दृश्यले सिंगो देशको ध्यान खिचेको छ । घ’टना’स्थलबाट संकलन गरिएका विभिन्न प्रमाणहरुका आधारमा प्रहरीले मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीले पाएको त्यो सिसिटिभी फूटेज‘
घ’टना’स्थलबाट १५/ १६ टुक्रा भएको प्लाष्टिकको पिर्का, नयाँ देखिने नाईलनको डोरी, डोरी चु’डि’एको अवस्था विजयको श’व, त्यहाँ भेटिएका सम्पूर्ण समाग्री प्रहरी अनुसन्धान टोलीले संकलन गरेको थियो । प्रहरीको लागि अनुसन्धानमा सबैभन्दा सहयोगी बन्यो सिसिटिभी । हो, केहि समय अगाडी घरमा चोरी भएका कारण छिमेकीको सुझाव शिरोपर गर्दै पूर्वसचिव कार्कीले घरमा सिसिटिभी जोडेका रहेछन् । सीसीटीभीमा रेकर्ड भएको भिडियो नियाल्दै जाँदा प्रहरीले फेला पार्छ महत्वपूर्ण क्ल्प्सि । अर्थात् बिहान १० बजेर ८ बजेको समयमा क्याप्चर भएको दृश्य ।
आ’त्मह’त्या गरेका भनिएका विजय चौधरी २२ वर्षिय विजय चौधरी यताउता गरिरहेका देखिन्छन् । पूर्वसभिव कार्कीकी श्रीमती मुना कार्की भान्छामा हुन्छिन् । अचानक विजयले प्लाष्टिकको पि’र्का उनको टा’उकोमा ब’जा’र्छन् । निरन्तर साङ्घातिक आ’क्र’मण उत्रन्छन् चौधरी । मुनालाई भान्छाबाट घि’सार्दै भु’त्ला’उँदै भुईमा टाउको समेत ठोक्काईदिन्छन् । पूर्वसचिव पत्नि कार्की पछाडी फर्किएको बेला ति चौधरीले डो’रीले घाँ’टीमा कसेको दृश्य निकै द’र्द’नाक र अ’प’त्यारीलो छ । उनले भुईमा पछारिएकी मुनालाई पि’र्का प्र’हार गर्छन् । कपालमा भु’ता’ल्दै भुइँमाबजार्ने क्रम जारी राख्छन् ।
अचानक कामदार आइलागेको देखेपछि मुना कार्की रु’न चि’च्या’उन थाल्छिन् । तर उनको जोडबल चल्दैन । चौधरीको प्रहारबाट आलसतालस हुन्छिन् उनी । शरीरबाट रगत बाहिरीन थाल्छ । घ’टना’स्थलमा पुगेको प्रहरीले मुचुल्का तयार पार्ने क्रममा समेत त्यो कुरा उल्लेख गरिएको थियो । सञ्चारमाध्यमलाई प्राप्त फोटोमा समेत उनी लडेको ठाउँमा रगतको आहल देखिन्छ । तर सिसिटिभीमा ति चौधरीले आफैँ आ’त्म’हत्या गरेको भने देखिएको छैन । फुटेजमा चौधरी निकै आ’क्रो’शित भएर मा’रपि’टमा उत्रिएको देखिन्छ । सानेपास्थित आफ्नै निवासमा सुखद जीवनयापन गरिरहेका पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीले यस्तो घ’टना देख्नुपर्ला भनेर कल्पना सम्म पनि गरेका थिएनन् ।
घ’टना’स्थल नजिकै निवास भएकी र नातामा ज्वाई पर्ने पूर्वसचिव कार्की परिवारबीचमा कहिल्यै त्यस्तो नराम्रो घ’टना नभएको बताउँछिन्, सांसद कोमल वली । उनको एक सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भनेकी छिन् म र दाजु बाहिरबाट घर आएका थियौँ। खाना खान मात्रै लागेका थियौँ । अचानक लौन नि यो के भयो म ब’र्बाद भएँ । म सकिँए । भन्दै डाँको छोडेर रोएको पुरुषको आवाज आएपछि म र दाजु छतमा आएर कसलाई के भयो भनेर प्रतिप्रश्न गर्यौँ । उहाँ रुवाबासी गरेको देखेर हामी दौडदैँ उहाँको घरमा आयौँ । उहाँ पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्किनुभएकोले गलामा फूल र रुद्धाक्षको माला समेत थियो ।
आँगनमा ल’डिबु’डि गरेको उहाँलाई देखेपछि हामी घ’टना’स्थल प्रवेश गर्यौँ । भाँडाकुँडा यत्रतत्र छरिएका थिए । सामानहरु ल’थालिं’ग थिए । वि’भ’त्स दृश्य आँखै अगाडी थियो । घरमा काम गर्ने केटो नाईलनको जस्तो देखिने नयाँ डोरी माथि उ तल भुईमा ल’म्प’सार थियो । मैले अ’तालिँ’दै आफ्नो घरबाट घ’टना’स्थल आउँदा डिआईजीलाई फोन गरेर सबै कुरा भनेकी थिएँ ।
उहाँले तत्काल प्रहरी अधिकारीहरु घ’टना’स्थल आईसक्ने जानकारी गराईसक्नुभएको थियो । आँगनमा ज्वाई पूर्वसचिव कार्की आलसतालस हालतमा हुनुहुन्थ्यो । पछि प्रहरी अधिकारीहरु आउनुभयो । प्रारम्भिक हेर्दा उहाँमाथि सां’घा’तिक हमला गरेर आफूले पनि आ’त्मह’त्या गरेको जस्तो देखिन्छ । य’द्यपी अनुसन्धानले सबै खुलाउँछ ।
कहाँ भएको थियो घ’टना ?
ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित सानेपा । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको निवास यहिँ छ । साढे दुई तले घर छ, कार्कीको । उनकी छिमेकी हुन् राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वली । प्रहरी बिट सानेपाबाट नजिकै पर्छ उनको घर । करिब ५०० मिटरभित्र । घरमा एउटा कुकुर छ । चारैतिर पर्खालले घे’रेर बलियो गेट छ यो घरमा । घरभित्र छिर्ने गेट नजिकै रहेको पोलमा दुवैतर्फ सीसीक्यामेरा समेत जडान गरिएको छ । यहि घरको लिभिङ रुम र किचनको बिचमा यो वि’भ’त्स घ’टना भएको थियो ।
कहाँ थिए कार्की ?
पूर्वसचिव अर्जुन कार्की बिहान पूजा गर्न मन्दिर गएका थिए । अरु बेला खेलकुदमा सक्रिय हुने उनी त्यसदिन पशुपतिनाथ मन्दिर गएका थिए । उनका दुई छोरी बाहिर देशमा छन् । पढाईको सिलसिलामा। १२ वर्षिय छोरा स्कुल गएका थिए । ति बालकलाई पुर्याउन अर्की कामदार किशोरी पनि घरबाहिरै थिईन्। घर सफा गर्नका लागि राखिएकी उनी बिहान-बिहान कार्कीको घरमा पुग्थिन् । पूर्वसचिव कार्की चिया खाइसकेपछि बिहान प्रायः खेलकुदमा व्यस्त रहन्थे । कहिले ब्याडमिन्टन त कहिले गल्फ ।
तर, हुने हार दैव नटार भनेझैँ उनलाई पूजा गर्न मन लागेर चालकसँग गाडी निकाल्न अनुरोध गरे । ड्राइभरलाई लिएर उनी पशुपति मन्दिर गए । दर्शन गरे र फर्के । तर घर आएर निकै बेर गेटमा घण्टी दिए । गेट खुलेन । उनी आफैँ गएर गेट खोले । भित्र जान्छन्, घरमा काम गर्ने केटो झुण्डिएको जस्ते देखिन्छ । डोरी चुँडिएको छ। शव भुईमा पसारो परेको छ ।
उनी श्रीमतीलाई गुहार्छन् । श्रीमतीलाई पनि चालचुल छैन । उनी पनि नि’मर्म प्रहा’रपछि लमतन्न छिन् । यो देखेर उनको होसहवास उड्छ । उनी आ’क्रा’न्त बन्छन् । चि’च्चा’उँदै बाहिर आउँछन् उनको यो हालत देखेर छिमेकी आ’त्तिदै आउँदा यो कुरा थाहा पाउँछन् । प्रहरीलाई खबर पुग्छ । प्रहरी घ’टना’स्थल पुग्छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट टेक्निकल टिम घ’टना’स्थल पुगेर सुक्ष्म अनुसन्धान सुरु गर्छन् ।
समय कुन थियो ?
गाडीमा बिहान ७ बजे घरबाट निस्केका अर्जुन कार्की करिब ८ बजेतिर मन्दिर पुगेका थिए । २ घण्टा लामो लाइन बसेर उनले मन्दिरमा पूजा गरे । पूजाआजा सकेर घर फर्किँदा करिब साढे १० बजेको थियो । उनि घर आइपुगेको समयमा यी घ’टना भइसकेका हुन्छन् ।
चौधरीको फेरिएको व्य’व’हार‘ !
केहि दिनदेखि चौधरी केहि सोचेजस्तै देखिन्थे । घो’त्लि’न्थे । तर उनलाई खासै नगरेको परिवार बताउँछ । सहयोगी चौधरीले सधैँ बिहान–बिहान कार्कीलाई मात्र चिया बनाएर दिन्थे । तर, सोमबार बिहान चौधरीले घर सफा गर्ने महिलादेखि कार्कीकी श्रीमती, छोरा र चालकलाई समेत चिया बनाएर खुवाएका थिए ।
घ’टनापछि सांसद कोमल वलीले एक अनलाईन सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै केहि अगाडी यो घरमा चो’रीसमेत भएको थियो । उक्त चो’रीको घ’टनामा कतै तिनै मृ’तक विजयको त हात थिएन भन्दै आ’शंका व्यक्त गरेकी छिन् । यद्यपी यो छानबिनको विषय भएकोले प्रहरीलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी छिन् । विजयलाई त्यस दिन बिहान एक छिमेकीले बजारमा हिँडिरहेको पनि देखेका रहेछन् ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान‘
कार्कीकी श्रीमती मुना कार्की र’गतले ल’तप’तिएको अवस्थामा फे’ला परेकी महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी टेकप्रसाद राईले बताए । घ’टना’स्थलमा ‘कार्कीको घरमा काम गर्ने चौधरी मृ’त अवस्थामा फेला परेका थिए ।’ ‘मुनाको टा’उकोमा पिर्का’ले प्र’हार गरेको र घाँ’टीमा चो’ट लागेको देखिएको जनाएको प्रहरीले सिसिटिभी फूटेज हेरेर घ’टनाबारे अनुसन्धान गरेपछि चौधरीले नै घ’टना गराएको पत्तो लगाएको हो। घ’टनाको करिब एक घण्टापछि प्रहरीले परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी बोलाउँदा मुनाको श’रीर तातै रहेको फेला परेपछि उनलाई तत्कालै स्टार अस्पताल पठाएको थियो । तर, अस्पतालले पनि कार्कीलाई मृ’त घो’षणा गर्यो ।
कार्कीकी श्रीमतीको ह’त्या गरेर सहयोगी विजय चौधरीले नाइलनको डोरीले क’सेर आ’त्मह’त्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । तर ह’त्यापछि आ’त्मह’त्या नै गर्नुपर्ने दुईबीच के रिसिइबी थियो भन्ने खुलिसकेको छैन । त्यसैमाथि सिसिटिभी केलाईरहेको प्रहरीले चौधरीले आ’त्मह’त्या गरेको फुटेज भने फेला पारेको छैन ।
‘घ’टनास्थलमा प्लास्टिकको पि’र्का पनि टु’क्रा-टु’क्रा भएको अवस्थामा फेला परेको छ । चौधरी झु’ण्डि’एको डो’रीसमेत चुँ’डि’एको थियो । उनी मृ’त नै भेटिएका थिए । घट’नाको सुक्ष्म अनुसन्धानको लागि अनुसन्धान अधिकारीहरूले पूर्वसचिव अर्जुनको घरमा रहेको सीसीटीभी क्यामराको फुटेज र घ’टनास्थ’लबाट संकलित सबै सामाग्रीको गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
श्रीमतीको वि’भ’त्स मृ’त्युको वियोगमा रहेका पूर्वसचिव कार्कीले भावविह्वल हुँदै आफ्नो १२ वर्षिय छोरा घरमा भएको भए छोरा पनि म’र्ने रहेछ भन्दै मिडियासँग भक्कानिएका थिए ।
उनको टा’उको कु’र्सीले प्र’हार गरेको र घाँ’टीमा चो’ट लागेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । शुरुमा छिमेकीले कार्कीको ह’त्या भएको जानकारी दिए पनि घ’टनाको करिब’ एक घण्टापछि प्रहरीले परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी बोलाउँदा कार्कीको शरीर ता’तै रहेको फेला परेपछि उनलाई तत्कालै अस्पताल पठाएको थियो । तर अस्पतालले मृ’त घो’षित गरिदियो ।
पूर्व सचिव कार्की यसअघि भूकम्पपीडितका लागि खरिद गरिएको भनिएको त्रिपाल र जस्तापाता काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिनमा परेका, २०७३ सालमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले भौतिक का’र’वाही समेत गरेको, सानेपामा उनीमाथि आ’क्र’मण भएको तथा उनी सवार गाडीमा क्षति पुगेको थियो । प्रहरी अधिकृतले ह’त्या यो’जनाब’द्ध रुपमा थियो भन्ने अनुमान गरेका छन् ।
घ’टना’स्थलबाट प्रहरीले भाँ’चिएको अवस्थामा प्लाष्टिकको पि’र्कासमेत ब’रा’मद गरेको छ।ह’त्याको कारण भने खुल्न सकेको छैन। सिसिटिभी फुटेजमा केही समय दु’ईपक्षबीच ल’डाई भएको समेत देखिन्छ ।अनुसन्धानमा ख’टिएका प्रहरी भन्छन्, नजिकै रहेको धारामा टा’उको ठो’कि’एको पनि हुनसक्छ, र’गत ल’त्प’तिएको थियो । अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रहरीले ह’त्याको कारण खोज्दै विभिन्न व्यक्तिसँग वयान लिने क्रम जारी राखेको छ ।
स्रोतका अनुसार झु’ण्डि’एको अ’वस्थामा फे’ला परेका चौधरीको पाईन्टमा वि’र्य फेला परेकोले ब’ला’त्कार भएको हो कि वा प्रयास भएको थियो कि भन्ने एंगलबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यस्तै मृ’तक मुनाको देब्रे स्त’नमा टोकेको जस्तो आकृति देखिएको भन्दै उनीमाथि ब’ला’त्कार भएको भनिएको छ ।
तर प्रहरी अधिकारीले कुराकानीको क्रममा भनेका छन्, प्रतिकारको क्रममा त्यस्तो भएको उनी बताउँछन् । उनको मृ’त शरीर पो’स्ट’मार्टमको लागि अस्पताल लगिएको थियो । पो’ष्टमा’र्टमका लागि अस्पताल लगिसकेकाले चिकित्सकको रि’पोर्टले नै ज’बरज’स्ती क’र’णीको भएको हो वा होइन भन्ने निश्चित गर्नेछ । यहीको रि’पोर्ट आएपछि मात्रै अरु तथ्य खुल्नेछ ।यी ड’रलाग्दा घ’टना जसमा कामदारको हात थियो ।